मनोरञ्जन – Page 594 – Etajakhabar
लुटको बोल्ड अवतार कथाको माग हो : एलिसा राई
काठमाडौँ । पछिल्लो समयकी चर्चित मोडल तथा नायिका एलिसा राईले आँफु रिलेसनमा नरहेको बताएकी छिन् । लुट २ को आइटम डान्स ठमेल बजारबाट ठूलो पर्दामा डेब्यू गर्ने अवसर पाएकी यि हट सुन्दरी राईलाई त्यसपछी पछी फर्केर हेर्नु परेको छैन । उनी दिनहुँ चलचित्र तथा म्यूजिक भिडियोमा ब्यस्त बन्दै गइरहेका बेला आफ्नो ब्यक्तिगत जीवनका विषयमा पनि केही राज खोलेकी छिन् ।
खुमन अधिकारीले कृष्णा गुरुङलाई तिमी कुमारी छैनौ मलाई थाहा छ भनेपछि…
काठमाडौँ । चर्चित लोकदोहोरी गायक खुमन अधिकारीले चर्चित गायिका कृष्ण गुरुङलाई तिमी कुमारी छैनौ मलाई थाहा छ भनेका छन् । तर खुमनले यो कुरा एक कार्यक्रममा भन्न भ्याएका हुन् । खुमनले आफ्नो कुमारीत्वका बारेमा बोलेपछि गायिका कृष्णाले यस्तो उत्तर दिएकी छिन् ।
आलियाको जन्मदिनमा तनावमा परे साहरुख, निजी चिकित्सकले समस्या समाधान गर्न नसकेपछि पुगे अस्पताल
एजेन्सी । बुधबार राति बलिउड अभिनेता शाहरुख खान तनावमा परे । कारण थियो उनको गाडीले फोटोग्राफरलाई ठक्कर दिनु । आलिया भाटको २४औँ जन्मदिन मनाउन आलियाको घर पुग्नै लागेका बेला एक फोटोग्राफर शाहरुखलाई नजिकबाट फोटो खिच्ने लाग्दा शाहरुखको गाडीले उनलाई किच्न पुग्यो । उक्त दुर्घटना भए लगत्तै शाहरुखले आफ्ना निजी चिकित्सकको मद्धतमा फोटोग्राफरको उपचार मात्र गर्न लगाएनन् तत्कालै असपताल पुर्याए । शाहरुखले मान...
वरुण र आलिया मिलेर ऋतिकलाई यसरी जिते
एजेन्सी । वरुण धवन र आलिया भट्ट मिलेर ऋतिकलाई पराजित गरेका छन् । रुण धवन र आलिया भट्टले ब्यक्तिगत जीवनमा नभई ‘बद्रीनाथकी दुल्हनिया’को ब्यापारमा ऋतिक रोशनको ‘काबिल’लाई पराजित गर्न सफल भएको हो । ‘बद्रीनाथकी दुल्हनिया’ रिलिज ४ दिनमा नै करिब ६५ करोडको ब्यापार गरिसकेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । योसँगै चलचित्रले ऋतिक रोशनको ‘काबिल’ ले चार दिनमा कमाएको ५२ करोडको रेकर्डलाई पछि छाडेको छ ।
बहु प्रतिक्षित फिल्म बाहुबली-२ को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो सहित)
चैत ३ गते- बहु प्रतिक्षित हिन्दी फिल्म ‘बाहुबली २’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । आउँदो २८ अप्रिलमा रिलिज हुने यो फिल्मको ट्रेलर दक्षिण भारतीय भाषामा रिलिज भएको छ । ट्रेलरमा प्रभास राणा दग्गुबती, अनुष्का शेट्टीलगायतको अभिनय देख्न सकिन्छ । एस एस राजामौलीको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा देवसेना (अनुष्का शेट्टी) र महेन्द्र बाहुबली (प्रभास) को प्रेम प्रसंग पनि देखाउन खोजिएको छ । ट्रेलरमा अघिल्लो फिल्मकी ...
दर्जनौँ ह्याण्डसमहरुसँग रोमान्स गरिसकेकी रेखाको प्रेमिका रुपमा नै अयुवलाई किन तयार पारिन् कृषाले ?
काठमाडौं । युवा फिल्म निर्मात्री हुन् कृषा चौलागाईको पलासको यतिबेला सवत्र चर्चा छ । आगामी चैत १८ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको नायिका रेखा थापा मुख्य अभिनित नेपाली चलचित्र ‘पलाँस’मा नायिका रेखा थापा कोठीमा पुगेकी युवतीको जीवनमा आईपरेका चित्रलाई अभिनय माफर्त सन्देश प्रवाह गर्ने भूमिकमा प्रस्तुत भएकी छिन् । सोही चलचित्रमा नायक आयुव केसी रेखाका प्रेमीको भूमिकामा छन् भने कलाकार आयुव केसी भिलेन...
हरेक सफल प्रेमील जोडीको जीवन बुझाउने एउटा भिडियो, जसमा केकीले गरिन् सशक्त अभिनय
काठमाडौँ । गायक अनिश पाण्डेको मनसंग मन बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । लामो समयदेखि बेलायतमा बस्दै आएका गायक पाण्डेले बेलायतमा नै एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर भिडियो सार्वजनिक गरेका हुन् । जसमा पछिल्लो समयकी चर्चित नायिका तथा मोडल केकी अधिकारीको दमदार अभिनय रहेको छ । केकीले भिडियोमा नरेनसँग जोडी मात्रै नबाँधी एक कुशल प्रेमीकाको भूमिकामा सशक्त अभिनय गर्न सफल भएकी छिन् । काठमाडौँको पाशुपत क...
अच्छा लेकिन लण्डनको चिसोले समाउलाकि गायिका देविकाले ल्याइन् अर्को एल्बम
काठमाडौँ । गायिका देविका प्रधान देविका वन्दनाको नामले चिनिएको धेरै समय भयो । यहाँको चलन, अच्छा लेकिन लण्डनको चिसोले समाउला’, ‘भरे आउँछु सपनीमा पर्खिराख है’ जस्ता कालजयी गीतमा स्वर दिएर सदावहार गायिकाको परिचय बनाएकी गायिका वन्दनाको चर्चा नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा अहिले पनि हुने गरेको छ । र यही मेसोमा गायिका वन्दनाको ऊँ साई राम नामक एल्बम विमोचन गरेकी छन् । उनको नयाँ एल्बमका बारेमा थप जानकार...
दिक्पाल र श्रेया तिन जुरेको डांडैमा गुराँस फुल्ने वनमा रोमान्स गर्दै
काठमाडौँ । मनोरम लालीगुराँस बनको सम्झना गर्दै मौलिक लोकलयको गीत "तिन जुरेको डांडैमा गुराँस फुल्ने वन " सार्बजनिक भएको छ। गायक तथा संगीतकार हिमाल सागरको संगीत र डा सोहन घिमिरेको शब्द र स्वर रहेको मौलिक लोकलयको गीतको भिडियोमा चर्चित मोडल दिक्पाल र श्रेया कार्कीको अभिनय रहेको छ। चर्चित कलाकार ज्योति काफ्ले (नक्क्कली बाबुराम ) र दीपेश रेग्मीको निर्देशन रहेको म्युजिक भिडियोमा गा...
आफ्नै आँगन पोखरामा घन्किँदैछ नेपथ्य ब्याण्ड,लाईभ कन्सर्टको तयारी तिव्र
पोखरा २, चैत्र- नेपथ्य ब्याण्डको प्रस्तुतीः पोखरामा हुने भए पछि उक्त कार्यक्रमलाई सफल पार्न यति वेला तयारी तिव्र पारिएको छ । सामुदायिक बिद्यालयको सहयोगार्थ फेरी उठ्ने छ नेपाल नामक इभेण्टको दोश्रो संस्करण पोखरामा हुने भए पछि उक्त कार्यक्रमको तयारी तिव्र पारिएको कार्यक्रम संयोजक विकेश कायस्थले बताए । उक्त ईभेण्ट मार्फत नेपालकै चर्चीत ब्याण्ड नेपथ्यले आउदो ८ अप्रिल अर्थात चैत्र २६ गते शनिबार पोखरा ...
Previous 1 … 593 594 595 … 842 Next